သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေးက CDM ဝန်ထမ်းများအတွက် ငွေကျပ်(၁၅)သိန်း ထောက်ပံ့
"We Support Heroes" ကို လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖွေးဖွေးက စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်ရေးမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ကူညီပေးနိုင်ဖို့ ငွေကျပ်(၁၅) သိန်းလှူဒါန်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရဝန်ထမ်းအများစုဟာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ အလုပ်မသွားကြဘဲ Civil Disobedience Movement ကို လုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီပေးလျှက်ရှိတဲ့ "We Support Heroes" အဖွဲ့ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေးက ငွေကျပ်(၁၅) သိန်းလှူဒါန်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
" ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ မှာ CDM မှာပါဝင်ပေးကြသော ဝန်ထမ်းများကို ပံ့ပိုးဖို့ "We Support Heroes" ကို လေးစားထိုက်ပါသော ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း မွေးနေ့အမှတ်တရ (၁၅)သိန်း လှူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖွေး နောက်ထပ်လည်း လှူသွားပါဦးမယ်။ CDM အောင်ရမည်။ I Believe !!! I Respect!!! 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐀𝐮𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐧 ဗိုလ်ချုပ်အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်က တော့"ကြောက်ခေတ်ကိုပြန်မသွားကြေး" ပေါ့ရှင်" ဆိုပြီးတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၃) ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဖွေးဖွေးကိုယ်တိုင်ကလည်း စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်ရေးအနေနဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂) ရက်နေ့ ကတည်းက သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့မှာတော့ လှည်းတန်းလမ်းပေါ်မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။